Ben 10 Ommiverse and TKO Titanic Kungfubot Offensive - Online
နေအိမ် » လှုပ်ရှားမှု » Ben 10 Ommiverse and TKO Titanic Kungfubot Offensive
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Ben 10 Ommiverse and TKO Titanic Kungfubot Offensive
ဖေါ်ပြချက်: ဒီဂိမ်းထဲမှာသင်ကသင်၏အဆွေခင်ပွန်းအပေါင်းတို့နှင့်တွေ့ဆုံရန်မည်! ဤရွေ့ကားကာတွန်းကွန်ယက်၏သင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျပြီးသားစှဲမဖြစ်ပါသလား ရုံအစိတ်အပိုင်းကို ယူ. တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်တူကိုတိုက်။ အာဏာအရှိဆုံးဇာတ်ကောင်ကိုရှေးခယျြဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။ မင်းကံကောင်းပါစေ။
ကစား: 38,341 tag ကို: en 10 Omniverse, Ben 10 Omniverse games, ဂြိုလ်သား, ဧရာမသတ္တဝါကြီး, Titanic Kungfubot Offensive, Titanic Kungfubot
ဂြိုလ်သား2vs သိုးတို့ကို shaun
၎င်းတို့၏မိတ်ဆွေများကိုပြန်ပေးဆွဲခဲ့သူအစိမ်းရောင်ဂြိုလ်သားပေါ်တွင်သိုးရဲ့ယူကလဲ့စားချေကိုကူညီပါ။ သင်ဂြိုလ်သားကိုဖျက်ဆီးဖို့ဆွဲငင်အား၏တရားအသုံးပြုရမည်ရှိရာတစ်ဦးကပျော်စရာရူပဗေဒပစ်ခတ်မှုဂိမ်း။ အမြဲတမ်း, Good Luck နှင့်ရှိသည်ပျော်စရာအဖြစ်။
ben 10 လေယာဉ်ပျက်ကျမှုကားများ
Ben10 ကားတစ်စီးမောင်းသူတို့နှင့်ဘေးထွက်ထိရှိခြင်းအားဖြင့်အခြားသူတို့ကိုဖျက်ဆီးမည်။ သင့်ကားကိုမောင်းဖို့မြှားခလုတ်များကိုအသုံးပြုပါ။ ကိုချိုးဖျက်ဖို့အာကာသကိုသုံးပါ။ အဆင့်ပြီးမြောက်ရန်အချက်များစုဆောင်းပါ။ ခံစားကြည့်ပါ!
ben 10 omniverse code ကိုအနီရောင်
ဘင် 10 Omniverse Code ကိုအနီရောင်။ ကာကွယ်ရေးရန်သင့်နဂါးကိုရွေးချယ်ပါ, ဘင် 10 ဒီမစ်ရှင်ပြီးစီးခြင်းနှင့်ဤဂိမ်းအားလုံးအဆင့်ဆင့်လွန်ကိုကူညီပေးပါတယ်။
ben 10 Galactic မိကျောင်းစုဆောင်း
Galactic Monsters Collection ကိုဘင်အ 10 ကိုဂိမ်းဖန်ဆင်းရှင်ထံမှဂိမ်းတစ်ခုသီးသန့်စုဆောင်းသည်။ ထောင်ချောက်-oh ဒါမှမဟုတ်မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေတိုက်ဖျက်နေ့ကယ်ဖို့ Blitzwolfer ၏ Sonic ဝံပုလွေစွမ်းရည်၏ elastic mummy အင်အားကြီးသုံးပါ။ w ဤရွေ့ကားထုံးစံလုပ်အဆင့်ဆင့်
ben 10 omniverse အာကာသကျူးကျော်
အဆိုပါသူရဲကောင်းဘင် Tennyson အ Omnitrix Tower.Hit ပိုပြီးမှတ်များအတွက်အာကာသယာဉ် Chimerian Hammer အောင်နိုင်လိုသူအာကာသကျူးကျော်တည်သော နေ့မှစ. ထိုမြို့ကိုခုခံကာကွယ်ဖို့လိုပါတယ်။ စက်ရုပ်၏လေဆာရောင်ခြည်တန်းကိုရှောင်ရှားပါသို့မဟုတ်သင်သည်မပျက်စီးကြလိမ့်မည်။ ဒါဟာသူရဲကောင်းအချိန်ပဲ!
ben 10 omniverse: သဲကန္တာရပြိုင်ကား
ဒီဘင် 10 Omniverse စီးရီးဂိမ်း၏ပျော်စရာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘင် 10 ဒီဂိမ်း၏အတားအဆီးအားလုံးကိုနှင့်အဆင့်ဆင့်သွားသူ့အ motobike စီးကိုကူညီပါ။
ben 10 omniverse ရန်ပွဲကိုမကောင်းသောအ
ဒီဘင် 10 Omniverse ဂိမ်းထဲမှာ, Shocksquatch, လာကြတယ်မှ CTR key ကိုရွှေ့ဖို့ဘင် 10. အသုံးပြုမှု Arrow key ကို၏မိတ်ဆွေတစ်ကယ်တင်ရန်ဘေးဥပဒ်အပေါင်းတို့နှင့်ဂြိုလ်သားဘင် 10 ရန်ပွဲကိုကူညီပေးပါတယ်။ ကံကောင်းပါစေ!
အမေဇုံမြစ်ပေါ်တွင် ben 10 စစ်
ဘင် 10 canon မောင်းနှင့်ရန်သူပစ်သူ့ကိုဟဲ, အမေဇုံမြစ်ပေါ်မှာရှိသမျှရန်သူဖျက်ဆီးဖို့တစ်မစ်ရှင်ရှိပါတယ်။
ben 10 omniverse heatblast တိုက်ခိုက်
Ben10 Heatblast တိုက်ခိုက် Heatblast နှင့် Gwen မြို့အဝင်ကနေရန်သူများကိုကိုင်ဖို့ကာကွယ်ရေး၏နောက်ဆုံးလိုင်းဖြစ်ကြသည်။ ရန်သူဂြိုလ်သားကိုသတ်ခြင်းနှင့်မြို့ကာကွယ်ပေးသည်။
ben 10 omniverse ဒုံးပျံတိုက်ခိုက်
ဒီဂိမ်းထဲမှာ, ဘင် 10 နှင့်မိကျောင်းအားလုံးတပါးရိုက်ကူးအားမိမိဒုံးပျံကိုအသုံးပြုပါ။ သူ့ကိုကမ္ဘာ့အကယ်ဖို့သူတို့ရဲ့မစ်ရှင်ပြီးစီးခြင်းကိုကူညီပါ။
စက်ရုပ်၏ SpongeBob မြေယာ
ပက်ထရစ်မိကျောင်းသမုဒ္ဒရာအားဖြင့်ပြန်ပေးဆွဲခဲ့ SpongeBob ရဲ့မစ်ရှင်ပက်ထရစ်ကယ်တင်ရန်ဖြစ်ပါသည်, သူ့ကိုအောင်မြင်စွာပက်ထရစ်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ဖို့လမ်းပေါ်မှာရှိသမျှမိကျောင်းကိုသတ်ကိုကူညီပေးပါ။
ben 10 ရိုင်းပြေး
Ben10 တောရိုင်း Run ကို: Ben10 အပေါငျးတို့သညျရနျသူတို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့မြန်နှုန်းအတွက် run နေဒီအချိန်။ သင့် task တွင်းထဲသို့ကျသွားမရှိဘဲလိုရာခရီးရောက်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးပျော်စရာရှိသည်လမ်းတစ်လျှောက်ရန်သူများကို dashing အားဖြင့်အပိုမှတ်ရ!
နဂါး Squad ပိုပြီးစိန်ခေါ်မှု RPGs နှင့်အတူပြန်ပါ! 60 ရန်သူသည်စုံ,6ထူးခြားတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ 300 ကျော်ပစ္စည်းများ, စာလုံးပေါင်း, ပစ္စည်းကိရိယာများ, ပညတ်တော်, ကျွန်နှင့်အထူးတိုက်ခိုက်မှုကျော်အင်္ဂါရပ်များ,
ဒီဂိမ်းထဲမှာ, ဒိုမိကျောင်းတွေအများကြီးရှိသည်, သူမ၏အားလုံးမိကျောင်းတိုက်ခိုက်ရန်နှင့်ဤဂိမ်းအားလုံးအဆင့်ဆင့်အပြီးသတ်ကူညီဘယ်မှာ, တော၌ဂေါက်သီးကစား။
နဂါးကမ္ဘာခွက်ကို 2014 ခုနှစ်,
ဘရာဇီးအတွက် 2014 ခုနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလားမှအသင့်ဖြစ်ပြီလား? သို့သော်စောင့်ဆိုင်း! ဒါကသာမန်ကမ္ဘာ့ဖလားမဟုတ်ပါဘူး, ဒီတစ် Monster ကမ္ဘာ့ဖလား၏! ပုံမှန်ဘောလုံးသင့်ရဲ့လူမြိုးထဲကတစ်ဦးနဂါးအဖွဲ့အဖြစ်ဒီမှာလျှောက်ထားပါဘူး, သင့်ကိုဆန့်ကျင်ကစားသမားဆီသို့ဦးတည်ဘောလုံးကိုကန်သင့်တယ်, ရှိသမျှရိုက်နှက်
ben 10 omniverse ကမ္ဘာပေါ်တွင် save
ဂြိုလ်သားကမ္ဘာထဲမှာဘင် 10 ရိုက်ကူးအားလုံးရန်သူကူညီပါနှင့်ငါတို့မြေကြီးတပြင်ကာကွယ်ပေးဖို့သူဌေးကသတ်ကြလော့။
တကျွန်းတနိုင်ငံသားကျူးကျော်မှဘင်အ 10 ကိုကူညီပါ။ သငျသညျ, လေးလက်နက်, Ripjaws နှင့် Stinkfly ၏ပုံစံများကိုအသုံးအတှေ့အကွုံအချက်များကိုဝင်ငွေနှင့်သင်၏အဆင့်အတန်းကို upgrade နိုငျသညျ့စွန့်စားမှုဂိမ်းစိတျလှုပျရှားဖှယျ။
ben 10 အန္တိမဂြိုလ်သား: အန္တရာယ်အတိုင်းအတာ
ဘင် 10 Ultimate ဂြိုလ်သား: Dimension မှစ. အန္တရာယ်။ ဘင်နှင့် Rook Billy ဘီလီယံရပ်တန့်ဖို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါင်းစပ်နှင့်ဧရာစက်ရုပ်မိမိတပ်
chima ၏ဒဏ္ဍာရီ: သေမင်း၏ manor
ben 10 omniverse: psyphon အသွင်ပြောင်း
ဒီဘင် 10 ဂိမ်းကိုသင် Undertown သူရဲတမှ Psyphon ရပ်တန့်ဖို့ Shocksquatch နှင့် Rook ကိုသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ မြေအောက်အဆင့်ဆင့်ကတဆင့်စစ်တိုက်သငျသညျစွန့်စားမှုအဖြစ် Psyphon ရဲ့တပါး minions ၏အဆုံးမဲ့အလုံးအရင်း။